दिल्लीमा नेपाली महिलामाथि सामूहिक बलात्कार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
नयाँदिल्ली — भारतको राजधानी नयाँदिल्लीबाट मुम्बईका लागि हिँडेकी २२ वर्षीय नेपाली महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ । दिल्लीको द्वारकामा आइतबार राति चारजनाले बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । ती महिला मुम्बई पुगेपछि मात्र घटना बाहिर आएको हो । घटनालाई लिएर मुम्बईको ओसिवारा पुलिस थानामा एफआईआर दर्ता भएको छ ।
प्रहरी अनुसन्धानमा ती महिला मुम्बईमा रहेका आफ्ना दाजुलाई भेट्न भन्दै ९ मेमा चितवनबाट नयाँदिल्लीका लागि हिँडेको खुलेको छ । उनी ११ मेमा बसबाट दिल्ली आइपुगिन् ।
पसलेले उनलाई मुम्बईमा पठाइदिन्छु र आवश्यक व्यवस्था गरिदिन्छु भनेर आश्वासन दियो । साँझ पर्दै गएपछि रातिको समयमा बाहिर बस्नु हुँदैनभन्दै आफ्नो कोठामा जान अनुरोधगर्‍यो । मुम्बई पठाइदिन्छु भन्ने आश्वासन पाएकी ती महिलालाई थाहा थिएन, रक्षकका रूपमा प्रस्तुत भएको व्यक्ति नै केहीबेरमाभक्षक हुन्छ भन्ने । नजिकैको कोठामा लगेपछि उसले बलात्कार गर्‍यो ।
मुख्य अभियुक्तका साथीहरूले उनलाई अटोरिक्सामा चढाएर दिल्ली स्टेसन पुर्‍याए र मुम्बई जाने रेलमा चढाइदिए । १३ तारिख राति मुम्बई पुगेपछि मात्र उनले घटनाबारे दाजुलाई बताइन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ ०७:३४
विराट नर्सिङ होममा शल्यक्रियापछि १०० सिकिस्त
विराट नर्सिङ होममा असोजयता पित्तथैली, एपेन्डिसाइटिस र पाठेघरको शल्यक्रिया गराएका बिरामीहरू संक्रमण भएर उपचारका लागि धाइरहेका छन्
जेष्ठ ३, २०७६ विनोद भण्डारी
विराटनगर — पुस दोस्रो साता विराट नर्सिङ होममा दूरबिनबाट पित्तथैलीको शल्यक्रिया गराएकी झापा, शान्तिनगर ७ की राधा निरौलाको घाउ अझै बिसेक भएको छैन । डा.आरके साबुले राधाको पेटमा चारवटा प्वाल पारेर दूरबिनबाट पित्तथैलीको ढुंगा निकालेका थिए ।
‘शल्यक्रिया गरेको अढाई महिना नबित्दै चारवटै प्वालमा घाउ भयो,’ राधाले भनिन्, ‘चिकित्सकलाई देखाउँदा इन्फेक्सन भयो भनेर फेरि शल्यक्रिया गरियो ।’ त्यसपछि एक महिनासम्म घाउमा ड्रेसिङ गराएको उनले बताइन् ।
‘अहिले फेरि चारवटै प्वालमा गाँठा पलाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘चिकित्सकले गाँठामै २० वटा इन्जेक्सन लगाए । एक महिनाको खाने औषधि दिएका छन्, गाँठा हराएको छैन ।’ छातीतिर अरू गाँठा पलाउन थालेको उनले बताइन् । दुई लाख रुपैयाँ खर्च भइसक्दा रोग बिसेक हुनुको साटो झन् दु:ख पाएको उनको गुनासो छ ।
विराटनगर महानगरपालिका ३ की ५५ वर्षीया सीता बस्नेतको पनि राधाकै जस्तो समस्या छ । उनको पनि विराट नर्सिङ होममा असोजमा डा. साबुले दूरबिनबाट पित्तथैलीको ढुंगा निकालेका थिए । ‘ढुंगा निकालेको पाँच महिनापछि घाउ साह्रै दुख्यो,’ सीताले भनिन्, ‘उनै चिकित्सकलाई देखाउँदा भिडियो एक्सरे गर्न लगाए । त्यसले भित्र मासु पलाएको देखाएको छ ।’
डाक्टरले घाउमा इन्फेक्सन भएको भन्दै दोस्रो अप्रेसन गरे । ‘त्यसपछि घाउमा गिर्खा देखा पर्न थाल्यो,’ उनले भनिन्, ‘गिर्खामा २० वटा इन्जेक्सन हानियो ।’ सीताका अनुसार यति गर्दा अहिलेसम्म झन्डै पौने दुई लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
विराटनगरकै दुर्गाबहादुर कार्कीको पनि असोजमा त्यही नर्सिङ होममा डा. साबुले दूरबिनबाट पेटमा तीनवटा प्वाल पारेर एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गरेका थिए । उनको पनि पीडा राधा र सीताकै जस्तो छ । शल्यक्रिया गरेको डेढ महिना नबित्दै तीनवटै प्वालबाट पिप आउन थाल्यो । त्यसपछि उनी थप उपचारका लागि दिल्ली पुगे । घाउ अझै निको भएको छैन ।
कार्कीले घाउ पुन: डा.साबुलाई देखाए । साबुले इन्फेक्सन भएको भन्दै दोहोर्‍याएर अप्रेसन गरे । दोस्रो अप्रेसनपछि पनि निको नभएपछि घाउमै इन्जेक्सन लगाउन सुझाव दिए । ‘डरले लगाएको छैन,’ उनले भने, ‘एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गर्दा अढाई लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्यो । धेरै दु:ख पाइयो तर घाउ बिसेक भएको छैन ।’
यो नर्सिङ होममा डा. साबुबाटै दूरबिनबाट पित्तथैलीको शल्यक्रिया गराएका चिकित्सक भानु साह पनि यस्तै पीडा भोगिरहेका छन् । कोसी अञ्चल अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट साहले दुई महिनाअघि डा. साबुबाटै दूरबिनबाट पित्तथैलीको ढुंगा निकालेका थिए ।
शल्यक्रिया गरेको एक महिना नबित्दै इन्फेक्सन भयो । एक सातादेखि काठमाडौंको मेडिसिटी अस्पतालमा थप उपचार गराइरहेका उनले भने, ‘आफैं चिकित्सक भएर पनि दूरबिनबाट शल्यक्रिया गराउँदा भएको इन्फेक्सनको पीडा भोगिरहेको छु ।’ उनका अनुसार हाल एन्टिबायोटिक औषधि चलाइएको छ ।
यो नर्सिङ होममा असोजयता दूरबिनबाट पित्तथैली, एपेन्डिसाइटिस र पाठेघरको शल्यक्रिया गराएका मध्ये सय जना यस्तै पीडा भोगिरहेका छन् । उनीहरू घाउमा इन्फेक्सन भएपछि पुन: उपचारका लागि धाइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय दूरबिनबाट गरिएका शल्यक्रियामा ‘एटिपिकल माइक्रो ब्याक्टेरिया इन्फेक्सन’ देखा परेको डा. साबुले स्विकारे । ‘पछिल्लो समय यस्तो इन्फेक्सनले निकैलाई सताएको छ,’ उनले भने, ‘यो इन्फेक्सन बाहिर छालामामात्र देखिएको छ । भित्री भागमा छैन ।’
उनका अनुसार एपेन्डिसाइटिसका बिरामीको शल्यक्रिया गर्दा तीनवटा प्वाल पारिन्छ । पित्तथैली र पाठेघरका बिरामीको पेटमा चारवटा प्वाल पारिन्छ । त्यसबाट दूरबिन छिराइन्छ । दूरबिनले भित्रको अवस्था कम्प्युटर स्क्रिनमा देखाउँछ । अनि त्यसमा हेरेर चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्ने उनले बताए ।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार पित्तथैली, एपेन्डिसाइटिस र पाठेघरको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामी दैनिक ५ देखि ७ जनासम्म हुन्छन् । गत असोज महिनायता यो प्रविधिबाट शल्यक्रिया गरिएको हो । त्यसरी शल्यक्रिया गरिएकामध्ये करिब सय जनामा संक्रमणको समस्या देखिएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ ०७:३२